Barcelona oo dooneysa inay baddelka Koeman ka dhigto macallin fashil dartiis loo ceyriyay xilli ciyaareedkii hore – Gool FM
(Barcelona) 30 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa wali baadi goob ugu jirta baddel ku habboon tababaraha haatan cadaadiska saaran yahay ee Ronald Koeman, waxaana cadaadiska uu kusii kordhay kaddib guuldarradii xalay kasoo gaartay naadiga Benfica ee dalka Portugal.
Barca ayaa guuldarro 3-0 kala soo laabatay dalka Portugal kulankii labaad ee wareegga guruubyada iyadoo labada ciyaarba isku natiijo lagu garaacay, waxaana taasi ay sii kordhisay cadaadiska maamulka Blaugrana ay saarayaan macallinka reer Netherlands.
Si kastaba ha ahaatee, Raadiyaha Catalunya ee kasoo baxa magaalada Barcelona ayaa sheegay inay naadiga reer Spain daneyneyso macallinkii hore ee Juventus, Andrea Prilo, kaasoo qaab ciyaareed liita awgiis looga eryay shaqada Bianconeri xilli ciyaareedkii hore si ay ugu baddesho Koeman.
Warar kale oo kasoo baxaya Spain ayaa xantan sii xoojinaya walow aanan la fahansaneyn qorshaha saxda ah ee ay maamulka Barcelona oo uu ugu horreeyo Madaxweyne Joan Laporta ka leeyihiin kursiga macalinnimo ee naadiga ku ciyaarta Camp Nou.
Cristiano Ronaldo oo fariin u diray Rio Ferdinand kaddib goolkii guusha uu ka dhaliyay Villarreal iyo difaacii hore ee Man United oo daaha ka rogay qoraalkii fariintaas